Fitaterana ny CVO: nosafidina ny orinasam-panjakana Paositra Rapida | NewsMada
Fitaterana ny CVO: nosafidina ny orinasam-panjakana Paositra Rapida
Vita omaly tao amin’ny foiben’ny Paositra malagasy ao Antaninarenina ny fifanarahana eo amin’ny Paositra Rapida sy ny Imra (Institut malagasy de recherches appliquées), ny amin’ny fanapariahana ny CVO (Covid organics), fanafody hiadiana amin’ny tsimokaretina Covid-19. Hatramin’ny nampiharana ny hamehana ara-pahasalamana, mitohy tsy tapaka ny asan’ny Paositra, indrindra eo amin’ny fitaterana.
Koa eo ny Paositra Rapida, nosafidin’ny Imra hitatitra io CVO io manerana ny faritra, ka ny laharam-pahamehana dia ny any amin’ireo faritra sy ny manodidina ahitana ny tsimokaretina. « Manana traikefa izahay eo amin’ny fitaterana, ny entana alefa anio, lasa anio ihany tsy misy mampanahy. Ny Paositra rahateo, orinasam-panjakana koa tombontsoa ho an’ny fanjakana ny fiaraha-miasa toy izao », hoy ny tale jeneralin’ny Paositra, Ranarison Richard, manome lanja ny vita malagasy.
Manohana ny vita malagasy
Amin’izao fiaraha-miasa izao, ny Paositra dia manohana ny fikarohana vita malagasy mampalaza ny Imra natsangan’ny Pr Ratsimamanga. tohizan’ireo mpikaroka aty aoriana. 45 izao ny karazam-panafody vitan’ny Imra, vokatry ny fitohizan’ny fikarohana. « Ahoana ny hanapariahana izany sy ny vokatry ny fiaraha-miasa amin’ireo mpikaroka vahiny ? », hoy ny tale jeneralin’ny Imra, Dr Andrianjara Charles. « Tsy misy fanerena akory ny fisotroana ny CVO, toy ny fanafody rehetra », hoy izy. Ny Paositra malagasy kosa, anisan’ny mpanjifa ny CVO, ka nividy izany ho an’ny mpiasa ao aminy rehetra manerana ny Nosy sy ny fianakaviany. 14 000 tavoahangy nozaraina maimaim-poana ho an’ny mpiasa rehetra.
Nohararaotina koa ny fotoana nilazana ny sampanasa sasany : Paositra money, tsy misy sarany ; fanavaozana ny ny foibe eo Antaninarenina miaraka amin’ny fanofanana mpiasa ; handray anjara amin’ny fandoavana fisotroan-dronono ; hajoro ny Paositra microfinance. Tsy ny Paositra fandefasana taratasy fotsiny, araka ny nahafantarana azy tany aloha izany izao ity orinasam-panjakana ity.